Weyne Rooney oo kabtan u noqon doona xulkiisa kulanka: Engaland vs San Marino. - Caasimada Online
Home Warar Weyne Rooney oo kabtan u noqon doona xulkiisa kulanka: Engaland vs San...
Weyne Rooney oo kabtan u noqon doona xulkiisa kulanka: Engaland vs San Marino.
Wayne Rooney ayaa kabtan u noqon doona xulkiisa marka uu jimcada isreebreebka koobka aduunaka wajahayo xulka San Marino ciyaar ka dhaceysa garoonka Wembley, sida ay xaqiijiyeen xiriirka kubada cagta Ingiriiska.
Xidiga Manchester United ayaa hugaamin doona Three Lions oo ay ka maqan yihiin kabtan Steven Gerrard oo ganaaxan ka dib markii uu casaan qaatay kulankii Ukraine iyo Frank Lampard kaasoo laga hubinaayo dhaawac jilibka ah ka dib gushii ay Chelsea sabtidii ka gaartay kooxda Norwich.
Sedax sano ayaa kasoo wareegtay markii uu Rooney xulkiisa horkacay ciyaar ay caasimada dalka Qadar ee Doha bishii November 2009kii ay kula ciyaarayeen xulka Brazil, markaasoo England la huwiyey guul darro 1-0 ah.
Weli xilli ciyaareedkaan cusub wax gool ah uma dhalin Manchester United laakiin waxaa lagu amaanay bandhig ciyaareedkiisa wanaagsan ka iyo markii uu dhaawac lugta ah soo gaaray kulankii Fulhan, isagoona laba gool caawiye ka ahaa kulankii ay United 3-0 ku dubatay Newcastle axadii.